रेखा किन ‘सेक्सी’ बनिन् ? |
Posted on January 18, 2010 by Yonepal
काठमाडौं । चलचित्र उद्योगमा लागेको मन्दीले कतिपय नायिकालाई वर्षभरीमा एउटा चलचित्र पाउन हम्मे छ । तर, नायिका रेखा थापा भने अपबाद् बनेकी छिन् । एकैचोटी दुई-तीनवटामा भ्याईनभ्याई छ उनलाई यतिखेर । आखिर यसरी ह्वात्तै किन बढ्यो त रेखाको क्रेज ? प्राय चलचित्रले रेखालाई चुल्बुले र आधुनिक केटीको भूमिकामा रोजेका छन् । अरु नायिका भन्दा छोटा लुगामा फुरुफुरु नाच्ने रेखालाई निर्माताहरुले मसलाका रुपमा पनि रोजेका छन् । एक निर्माताले भने- ‘उनको ग्ल्यामर्स फोटो पोष्टरमा देखेपछि प्राय नेपाली फिल्म नहेर्नेहरुको पनि मन तानिएको छ । हाम्रा लागि राम्रै हो । संकटको बेला जसरी हुन्छ फिल्म चलाउनु छ ।’ तर, एकखाले दर्शक भने चलचित्रको बिचबिचमा नाक खुम्चाउँछन् ।
« को-को थिए माघ १९ का डिजाइनर ? कालो झण्डामा नै हो त नागरिक सर्वोच्चता ? »